Teta! Nke 5 2016 | Jizọs Ọ̀ Bụ Mmadụ Dịrị Ndụ n’Ụwa A?
Olee ihe gosiri na Jizọs bụ mmadụ dịrị ndụ n’ụwa a?
Nchegbu na ime ihe ike bụ naanị ụfọdụ n’ime ọtụtụ nsogbu ndị e nwere n’Amerịka na mba ndị gbara ya gburugburu. Ò nwere ihe Baịbụl kwuru ga-enyere ha aka?
Ọtụtụ ndị na-eto eto taa na-ebido mgbe ha ka dị ezigbo ntakịrị matawa ihe ndị gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị. Gụọ ihe a ka ị mata ihe ndị i kwesịrị ịma na otú ị ga-esi nyere ụmụ gị aka ka ha ghara ịdaba ná nsogbu?
Kabọn bara uru ná ndụ karịa ihe ọ bụla. Gịnị ka ọ̀ bụ, gịnịkwa mere o ji dị ezigbo mkpa?
Ihe ndị sayensị oge ochie kụziri ka ndị kpọrọ onwe ha ndị Kraịst taa na-akụzi.
Vidio ndị dị na jw.org adọrọla mmasị ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi, ndị na-adụ ụmụ akwụkwọ ndụmọdụ, na ndị ọzọ.
Olee otú i nwere ike isi gosi ndị meere gị ihe na ihe ha meere gị dị gị mma?